၂၁၃၁၃ ပုလင်းထဲတွင်သင်္ဘောတင် Brick Fanatics
နှစ်ဆ VIP အမှတ်များနှင့် ၀ ယ်ရန်အငြိမ်းစား LEGO အစုံခြောက်ခု
11 / 10 / 2021 12 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 181 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၆၁ Roller Coaster, 21046 အင်ပါယာပြည်နယ်အဆောက်အ ဦး, 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, 42083 Bugatti Chiron, 75251: Dartဇ Vader's ရဲတိုက်, 75810 အဆိုပါဇောက်ထိုး, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော။, Architecture, Creator Expert, VIP အမှတ်နှစ်ချက်, Ideas, Lego, Lego Architecture, Lego Creator Expert, Lego Ideas, Lego Star Wars, Lego Stranger Things, Lego Technic, Lego VIP, LEGO VIP အမှတ်များ, အနားယူသည်, Lego အနားယူသည်, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, Star Wars, Stranger Things, နည်းပညာ, VIP, vip အချက်များ
နှစ်ဆ VIP အမှတ်ပွဲစဉ် startဤအွန်လိုင်း LEGO အစုံအားလုံးကို ၀ ယ်ရန်ဤအခွင့်အလမ်းကိုရစေသည်
Lego တိုင်း Ideas ၂၀၂၁ တွင်အငြိမ်းစားယူရန်သတ်မှတ်သည်
13 / 08 / 2021 13 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 552 Views စာ0မှတ်ချက် 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, 21321 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း, 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, ၂၁၃၂၃ Grand Piano, 92176 နာဆာ Apollo Saturn V ကို, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, Ideas, Lego, Lego Ideas, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, အဆိုပါ LEGO Group
Lego သုံးခု Ideas မကြာသေးမီကပြန်လည်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်တစ်ခုအပါအ ၀ င်အစုံများယခုနှစ်အတွင်းစင်ပေါ်မှအနားယူရန်ရှိသည်
LEGO ၏ပြီးပြည့်စုံသောစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည် Ideas အတွဲများသည် ၂၀၂၁ တွင်ဖြစ်ပုံရသည်
11 / 08 / 2021 11 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 405 Views စာ 1 မှတ်ချက် 21100 Shinkai 6500 ရေငုပ်သင်္ဘော, ၂၁၁၀၁ Hayabusa, 21102 Minecraft Micro ကမ္ဘာ့ဖလား: အဆိုပါသစ်တော, 21103 အဆိုပါ DeLorean အချိန်စက်, 21104 NASA အင်္ဂါဂြိုဟ်သိပ္ပံစမ်းသပ်ဓာတ်ခွဲခန်း Curiosity Rover, ၁၀၂၇၄ Ghostbusters ECTO-21108, 21109 Exo ဝတ်စုံကို, 21110 သုတေသနအင်စတီကျု, 21301 Birds ဂိမ်း, 21302 Big Bang သီအိုရီ, 21303 Wall-E ကို, 21304 ဆရာဝန်အဘယ်သူသည်, 21305 ဝင်္, 21306 အဆိုပါ Beatles အဝါရောင်ရေငုပ်သင်္ဘော, 21307 Caterham ခုနစ် 620R, 21308 စွန့်စားမှုအချိန်, 21309 နာဆာ Apollo Saturn V ကို, 21310 ဟောငျးငါးဖမ်းဆိုင်, ၂၁၃၁၁ Voltron, NASA ၏ 21312 အမျိုးသမီးများ, 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, 21314 TRON: အမွေ, 21315 Pop-Up စာအုပ်, 21316 အဆိုပါ Flintstones, 21317 Steamboat ဝီလီ, 21318 သစ်ပင်အိမ်, 21319 ဗဟို Perk, 21320 ဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း, 21321 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း, 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, ၂၁၃၂၃ Grand Piano, 21324 123 နှမ်းလမ်း, 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ, ၂၁၃၂၆ Winnie the Pooh, 21327 လက်နှိပ်စက်, ၂၁၃၂၈ Seinfeld, 40335 အာကာသဒုံးပျံစီးနင်း, 40448 စပျစ်သီးကိုကား, 40487 Sailboat စွန့်စားမှု, CUUSOO, Ideas, Lego, Lego Ideas, တွစ်တာ
LEGO ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့စုဆောင်းမှုဆိုတာဘာလဲလို့တွေးဖူးလား Ideas set တွေကတန်းစီပြီးထောင်ထားသလိုပဲလား။ စူပါဖန်တစ်ယောက်
Lego စာရင်းအပြည့်အစုံ Ideas 2021 နှင့် 2022 ခုနှစ်တွင်အနားယူအစုံ
25 / 03 / 2021 25 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1956 Views စာ0မှတ်ချက် 21309 နာဆာ Apollo Saturn V ကို, 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, 21318 သစ်ပင်အိမ်, 21319 ဗဟို Perk, 21320 ဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း, 21321 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း, 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, ၂၁၃၂၃ Grand Piano, 21324 123 နှမ်းလမ်း, 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ, ၂၁၃၂၆ Winnie the Pooh, 92176 နာဆာ Apollo Saturn V ကို, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, Ideas, Lego, Lego Ideas, LEGO.com, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, စျေးဝယ်, အဆိုပါ LEGO Group
Lego Ideas ၎င်း၏သက်တမ်းတိုစုံများအတွက်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အရာကို ဦး စားပေးရွေးချယ်ရမည်ကိုသိခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့သော် Brick Fanatics ဒီမှာ
အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောပန်းအိုးဖြင့် LEGO ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းခြင်း 10280 ပန်းပွင့်နှင့်ပန်းကန်လုံးကိုဖြည့်ပါ
09 / 01 / 2021 10 / 01 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 2327 Views စာ0မှတ်ချက် 10280 ပန်းပန်းစည်း, 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော။, ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု, ပုလင်း, Lego, Lego ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု, Lego Ideas, စကခ, တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, YouTube ကို
ပရိသတ်များသည်အသစ်စက်စက်ဖြန့်ချိထားသော LEGO Botanical Collection 10280 ပန်းပွင့်ပန်းစည်းနှင့်အတူအုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပန်းအိုးနှင့်တွဲဖက်နိုင်သည်။
Lego Ideas 92177 ပုလင်းထဲတွင်သဘောင်္သည်ယူကေသို့လာမည်မဟုတ်ပါ
14 / 11 / 2020 14 / 11 / 2020 ခရစ် Wharfe 701 Views စာ0မှတ်ချက် 21309 နာဆာ Apollo Saturn V ကို, 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, 92176 နာဆာ Apollo Saturn V ကို, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော။, Ideas, Lego, Lego Ideas
မကြာသေးမီက - ပြန်လည်ထုတ်ပေး LEGO Ideas set 92177 ပုလင်းထဲတွင်သင်္ဘောပြီးနောက်အားလုံးဗြိတိန်၌စတင်မည်မဟုတ်ပါ။ နှစ်
LEGO နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီလဲ Ideas 92176 NASA Apollo Saturn V ကို?
06 / 11 / 2020 07 / 11 / 2020 ခရစ် Wharfe 7076 Views စာ0မှတ်ချက် 21309 နာဆာ Apollo Saturn V ကို, 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, 92176 နာဆာ Apollo Saturn V ကို, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော။, Ideas, Lego, Lego Ideas
ပြန်လည်စတင် LEGO Ideas set 92176 NASA Apollo Saturn V သည် Billund မှဆင်းသက်လာသည်
LEGO နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီလဲ Ideas 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော?
02 / 11 / 2020 02 / 11 / 2020 ခရစ် Wharfe 2829 Views စာ0မှတ်ချက် 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, 92176 နာဆာ Apollo Saturn V ကို, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော။, Ideas, Lego, Lego Ideas
Lego Ideas 92177 ပုလင်းထဲမှသင်္ဘောသည်စင်ပေါ်သိုလှောင်ရန်ပြန်လာသည်။ သို့သော်ခြားနားချက်ရှိသည်။ ၎င်း၏အရသိရသည်
Lego Ideas 92177 US တွင်ရရှိနိုင်ပါတစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော
02 / 11 / 2020 02 / 11 / 2020 ခရစ် Wharfe 787 Views စာ0မှတ်ချက် 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, 92176 နာဆာ Apollo Saturn V ကို, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော။, Lego, Lego Ideas, LEGO.com
Lego Ideas reissue 92177 ပုလင်းထဲတွင်သင်္ဘောကို US ရှိ LEGO.com တွင်ရရှိနိုင်သည်။ The LEGO Group ရှိပါတယ်